Miasa miaraka ny mpikatroka Taiwaney sy ny mpikatroka Vietnamiana hanome rariny ara-pitsarana ireo tra-boinan’ny fiainana an-dranomasin’i Vietnam · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2018 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, 繁體中文, Français, Español, русский, Italiano, English
Mpanjono Vietnamiana ao amin'ny lakambory ho an'olon-tokana. Pikantsary avy amin'ny YouTube anaty tokon-tantara “Fahafatesan'ny trondron'i Vietnam” avy amin'ny programam-pahitalavitra Taiwaney “Our Island” [Ny Nosintsika].
Avy amin'ny ekipa Lingua Global Voices Shinoa
Tamin'ny taona 2016, niteraka voina ara-piainana an-dranomasina goavana tao Vietnam ny faika misy poizina nivoaka avy amin'ny toby fandrendreham-by voasedra Formosa izay Taiwaney ny tompony. Roa taona taty aoriana, any am-ponja ny mpikatroka ary potika tanteraka ny fivelomana ao an-toerana, Mbola lavitra dia lavitra vao ho vita ny ady hisian'ny rariny izay nahitana fiaraha-miasa teo amin'ny Taiwaney sy ny Vietnamiana.
Mbola tsy mazava ny haben'ny fahapotehana ara-tontolo iainana. Tsy namoaka ny tatitry ny famotorana ofisiany na ny lahatahiry ara-tontolo iainana amin'ny vahoaka ny governemanta vietnamiana.
Milaza ny manampahefana fa efa voaonitra avokoa ireo mponina rehetra niharam-boina; saingy maro tamin'izy ireo no tsy nahazo izany na nahazo ny ampahany fotsiny.
Raha manomboka mihamiverina ny trondro, dia tsy tahaka ny teo alohan'ny voina intsony ny isany. Lasa tsy an'asa ireo mpanjono, ary mbola manahy ny olona hoe tsy maninona ve ny mihinana ny trondro azo.
Nanao fihetsiketseham-panoherana ireo Vietnamiana avy amin'ireo faritra tratran'ny voina, saingy nisetra famoretana avy amin'ny manampahefana ny hetsika nataon-dry zareo. Raha ifotorana avy amin'ny fanadihadiana nataon'ny mpikatroka, mpampianatra ambony ary ireo Vietnamiana any Taiwan, Vietnamiana miisa 17 manana fifandraisana akaiky na lavitra amin'ny voina naterak'i Formosa no nosamborina na miatrika fisamborana. Ao anatin'ireo no ahitana an'i :
Nguyen Van Hoa, voadidy higadra fito taona an-tranomaizina noho ny “propagandy mankahala fitondrana” satria nampiasa fakantsary an-tantelimby (drone flycam) izy handefasana mivantana ny fihetsiketsehan'ny mpanjono nanodidina ilay toby fandrendreham-by;
Hoang Duc Binh, voadidy higadra 14 taona an-tranomaizina noho ny “fanararaotana tafahoatra ny fahalalahana demaokratika hanitsakitsahana ny tombontsoam-panjakana,” sy “fanoherana ny manampahefana eo am-panatontosana ny asany” mifandraika amin'ny fitantarany ny voina tao amin'ny bilaoginy;
Nguyen Nam Phong, voadidy higadra roa taona an-tranomaizina “fanoherana ny manampahefana” rehefa tsy nanaiky hanokatra ny varavaran'ny fiara izy teo am-pamiliana, ary nandeha tao anatin'izany ireo mpiaro ny zon'olombelona toa an'i môpera Nguyen Dinh Thuc sy Hoang Duc Binh, nanoloana ny baikon'ny olona nanao fanamiana sivily sy polisy nanao fanamiana;
Tran Hoang Phuc, voadidy higadra enintaona an-tranomaizina noho ny “propagandy mankahala fitondrana” mifandraika amin'ny asany namonjy ireo tra-boina;
Bach Hong Quyen, mbola any am-piafenana amin'izao fotoana izao satria miatrika fanamelohana “fanakorontanana ny filaminam-bahoaka” noho ny nikarakarany ny diabe tamin'ny taona 2017 ho fanamarihana ny herintaonan'ny voina;
Thai Van Dung, Katolika mpikatroka tafiditra tao anatin'ny fihetsiketsehana ary tadiavin'ny polisy noho ny lazaina fa fanitsakitsahany ny sazy miantona azony noho ny “hetsika mikendry ny hanongana ny Fitantanam-Panjakam-Bahoaka” tamin'ny taona 2013.
Ankoatra ny fanenjehana ara-pitsarana, nahazo fandrahonana avy amin'ny vondrona iray antsoina hoe “Saina Mena” mikambana ao amin'ny antoko komonista ihany koa ireo Katolika mpitondra fivavahana sy ny fiangonana, izay nanampy ireo vondrom-piarahamonin'ny mpanjono hahazo fanonerana. Ny iraka ampanaovina io vondrona io, araka ny nolazain'ny pretra iray antsoina hoe Dang Huu Nam tao amin'ny Radio Free Asia, dia ny “hanery ny katolika tsy hanao fihetsiketsehana manohitra ny tobim-pandrendrehamby Formosa sy ny hanesorana ireo ‘fahavalo katolika'”.
Izay tsikera mamely ny tobim-pandrendrehana sy ny fomba nitantanan'ny governemanta ny voina, sy ny antso hanaraha-maso ny fandotoana, dia heverin'ny antoko tokana eo amin'ny fanjakana ho fanakorontanana.
Tsy manaisotra ny olona ara-tontolo iainana ao amin'ny firenena anefa ny famafana feo manivaka.
Taorian'ny nidiran'i Vietnam tao amin'ny OMC Fifandaminam-Barotra Manerantany (WTO) tamin'ny taona 2007, dia niezaka ny hampiroborobo ny fitomboana ara-toekarena tamin'ny alalan'ny fisarihana ireo vahiny mpampiasa vola. Saingy ny tontolo iainana no miantok'aina amin'izany fampandrosoana haingana izany.
Tamin'ny taona 2016, raharaham-poizimpako lehibe miisa 50 no re tatitra tao Vietnam. Ao anatin'izany raharaha izany, ny fanariana ireo poizim-pako mankany amin'ny lalan-drano no tena henjana indrindra, ary ny 60 isanjato amin'izany dia avy amin'ireo orinasam-pampiasam-bola vahiny.
Noho ny fananany morondranomasina mahatratra 3000 kilaometatra, dia iray amin'ireo firenena ahitana hazan-dranomasina betsaka indrindra manerantany i Vietnam. Hazandranomasina ny tokotokony ho 3%-n'ny vokatra fanondran'i Vietnam, ary manodidina ny 10%-n'ny mponina ao Vietnam no tombanana ho manana ny fidirambolany mivantana na tsy mivantana avy amin'ny fanjonoana. Mahantra ny ankamaroan'ireo vondrom-piarahamonina ao amin'ny fanjonoana, ary mandray anjara amin'ny 75% amin'ny fidirambolan'ny isan-tokantrano ny fanjonoana sy ny fiompiana an-drano. Fanampin'izany, avy amin'ny vokatra an-drano ny atsasaky ny proteinina hohanin'ny Vietnamiana.
Fa ny orinasa niteraka voina ara-tontolo iainana ratsy indrindra tamin'ny firenena, ny Formosa Ha Tinh Steel Corporation, no fampiasam-bola vahiny goavana indrindra ao Vietnam. Tamin'ny voalohany izy io natsangan'ny Formosa Plastics Group avy any Taiwan tamin'ny taona 2008 fa taty aoriana, izany hoe tamin'ny taona 2015, kosa nahazo fampiasam-bola fanampiny avy amin'ny China Steel Corporation, miorina ao Taiwan sy ny JFE Steel avy any Japana.
Nanatsahatra ny asany izy io rehefa nisy ny fiparitahan'ny fako shimika fa niasa indray tamin'ny tapaky ny taona 2017, ary efa nikasa ny hampitombo ny fahafaha-mamokatra tamin'ny fananganana haut-fourneau faharoa (lafaoro avo fanempoana akoramby) amin'izao taona 2018 izao.
Tsy ny famonoan-trondro tamin'ny taona 2016 ihany no olana ara-piarovana entiny. Tamin'ny mey 2017, nisy fipoaham-bovoka nitranga nandritra ny andrana tao amin'ny toby. Ary tamin'ny Desambra 2017, voasazy nandoa onitra 25.000 dôlara amerikana ny toby noho ny nandevenany fako mivaingana mampidi-doza.
‘Raha efa nizaka izao karazam-pangirifiriana izao isika, dia tsy tokony hanavesatra izany amin'i Vietnam’
Toe-javatra nahasadaikatra ny governemantan'i Taiwan ny voina ara-tontolo iainana sy ny fiantraikany, satria orinasa taiwaney no tompon'ilay toby fandrendreham-by ary ny politika vaovao mitodika mianatsimo ataon'ireo governemanta, izay mikendry ny hanamafisana ny fiarahamiasa amin'ny ao amin'ny Association of Southeast Asian Nations (ASEAN na Fikambanan'ny Firenena Aziatika Afovoany Atsinanana), izay maha-mpikambana an'i Vietnam.
Nanolotra ny handefasana manampahaizana manokana momba ny tontolo iainana ho any Vietnam i Taiwan, saingy nolavina izany. Ankoatra izay, anefa, tsy dia nandray andraikitra loatra ny manampahefana Taiwaney, ka vokatr'izay dia niditra tamin'ny lalana rehetra azo nandehanana ny Vietnamiana any Taiwan sy ny Taiwaney mpikatroka hitadiavana ny rariny.
Notakian-dry zareo ny Formosa Plastics Group hamoaka ampahibemaso ny lahatahiry fanarahamaso ny tontolo iainana sy handray ny andraikitry ry zareo ampahibemaso, saingy tsy nohenoina ry zareo hatramin'izao. Nanontanin-dry zareo ihany koa ny China Steel Corporation, mpampiasa vola iray hafa avy ao Taiwan, saingy milaza ny solontenany fa tsy mahalala na inona na inona ny amin'izany.
Koa satria tsy manaiky ny hanenjehana ara-pitsarana ny Formosa Ha Tinh Steel Corporation ny fitsarana any Vietnam, dia nanantena ny Vietnamiana fa mety hitory ny orinasa any Taiwan ny Taiwaney. Na izany aza, tsy azo natao ilay izy satria miorina any Vietnam ny fatan'ny Formosa (ny toby fandrendreham-by).
Niara-dia tamin'ireo pretra hafa avy any amin'ny faritra tra-boina any Vietnam sy ireo solontenan'ny FTMF (ONG) Taiwaney maromaro ho any Eoropa ny mopera Peter Nguyen Van Hung, pretra katolika vietnamiana iray any Taiwan, hisarika ny fifantohan'ny iraisampirenena amin'ny olana ara-tontolo iainana sy zon'olombelona nateraky ny Formosa Plastics Group sy ny governemanta vietnamiana. Nitsidika ireo fifandaminana tany Etazonia izay vonona ny hanohana ara-pitsarana ireo tra-boina ihany koa izy.
Niarahan'ny mopera Hung niasa ihany koa ireo Vietnamiana, mpampianatra ambony, ary FTMF any Taiwan, ka anisan'izany ny Environment Jurists Association (EJA=Fikambanan'ny Mpahay Lalàna ara-Tontolo Iainana), ny Fikambanana ao Taiwan miaro ny zon'olombelona, ary ny Covenant Watch ao Taiwan, hanery ny Formosa Plastics Group sy ny governemanta taiwaney handray ny andraikiny manoloana ny voina.
Tamin'ny Desambra 2016, nangataka tamin'ny antenimierana Yuan ao Taiwan ny FTMF Taiwaney hampiatrano fotoam-pivoriana azon'ny rehetra atrehina momba ity zava-nitranga ity ary nangataka ny hanitsiana ny Satan'ny Fanavaozana Indostirialy, izay mifandraika amin'ny fandrisihana ny fampiasam-bola vahiny. Na dia nasiana fanitsiana aza ny Sata tamin'ny Novambra 2017, dia tsy nisy ny fanadihadiana anatiny na andininy fanombanana nampiana tamin'izany, izay midika fa tsy afaka manasazy vondron'orinasa noho ny fahadisoana natao tany ampitam-dranomasina eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana na zon'olombelona ny governemanta taiwaney.
Talohan'ny nahafantarana ny voina ara-tontolo iainana, vao nahazo fampindramam-bola mitentina 3,5 miliara dolara amerikana avy amin'ny banky 30 mahery ao Taiwan sy ampitan-dranomasina ny Formosa Plastics Group. Taoriana, nangataka tamin'ny banky anankiroa izay fehezin'ny governemantan'i Taiwan 100% ireo FTMF Taiwaney, dia ny Bank of Taiwan sy ny Land Bank of Taiwan, hihevitra handray ny Equator Principles [Fitsipika Equateur arahina] — andiana lasitra mipetraka arahin'ireo rafitra ara-bola hanombanana ireo loza mety hitranga eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy amin'ny fanomezana vola ny tetikasa — saingy tsy nanaiky ry zareo. Etsy ankilan'izany, nanasonia izany ny bankim-barotra roa hafa tamin'ny 30, ny Cathay United Bank sy ny E.SUN Commercial Bank.
Tsy vahiny amin'ny voina ara-tontolo iainana ny Taiwaney. Yuyin Chang avy ao amin'ny EJA niresaka ny anton'ny firaisan-kinan-dry zareo nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2016:
Nanorina ny ozininy taty Taiwan ny orinasa RCA avy any Etazonia nanomboka ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1991, ary niteraka fandotoana betsaka tao Taiwan an-tanety sy an-drano ambanin'ny tany ry zareo ka namparary olona maro dia maro. Mbola iadiana eny amin'ny fatsarana io raharaha io hatramin'izao. Fangirifirian'ny Taiwaney izao. Raha efa nizaka izao karazam-pangirifiriana izao isika, dia tsy tokony hanavesatra izany amin'i Vietnam.